Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || विप्लव माओवादी फ्याउरे भइसके: एसपी थापा (अन्तरवार्ता) – kayakairan.com
विप्लव माओवादी फ्याउरे भइसके: एसपी थापा (अन्तरवार्ता)
चितवनका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)दीपक थापालाई यतिखेर भ्याइनभ्याइ छ । भोलि ऐतिहासिक स्थानीय तह निर्वाचन हुने दिन । त्यसैले पनि जिल्लाभरको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन अहोरात्र खटिनुपर्ने अवस्था छ । उनले सबै मतदातालाई ढुक्क भएर मतदान गर्न आह्वान गरेका छन् । चितवनको अहिलेको सुरक्षा चुनौतीलाई उनले ३ भागमा वर्गीकरण गरेका छन् । कायाकैरनसँगको टेलिफोन कुराकानीमा उनले त्यस्ता चुनौतीविरुद्ध प्रहरी ‘हाई एलर्ट’ रहेको भन्दै आममतदातालाई कुनै चिन्ता नगरी घरबाट निस्कन भनेका छन् । उनीसँगको कुराकानी रोचक त तब भयो, जब उनले समाजका एक सुरक्षा चुनौती ‘गुण्डा’ लाई ५ प्रकारमा विभाजन गरे । एसपी थापासँग विनोदबाबु रिजालले शुक्रबार बेलुकि गरेको संक्षिप्त कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
जताजतै विस्फोट भयो, सुरक्षा खतरा आइलाग्यो भन्छन् नि !
सब हावा कुरा हुन् । चुनाव विरोधीले चलाएको हल्ला हुन् । कतिपय अनलाइनले यो अफवाह फैलाएका छन् । हामीले तिनीहरुको पहिचान गरी कारबाही अघि बढाइसकेका छौं । ढुक्क हुनुस्, ती सबै हावा हुन् ।
शुक्रबार बेलुकि वीरेन्द्र क्याम्पस आसपास शक्तिशाली विस्फोट भयो भनिएको थियो त !
हामीलाई पनि सूचना आयो र प्रहरी टोली पठाइयो । तर, त्यहाँ कुनै विस्फोट भएको थिएन । ट्रकको टायर पड्किएको थियो । त्यसैले फेरि भन्छु, यी हावा कुरा हुन् । कतैकतै विस्फोटक पदार्थ पाइएपनि हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौं । कोही विरोधी अब बाँकी छैनन् । सुरक्षा व्यवस्था कडा छ । कोही उम्किन पाउन्नन् ।
त्यसोभए चितवनको सुरक्षामा चुनौती नै छैनन् त ?
हामीले चुनावमुखी सुरक्षा चुनौतीलाई तीन प्रकारमा विभाजन गरेका छौं । पहिलो भनेको चुनावमा सहभागी राजनीतिक दलबीच एकअर्कामा हुने आरोप–प्रत्यारोप र त्यसले निम्त्याउन सक्ने समस्या, दोस्रोमा चुनाव विरोधी विप्लव माओवादीले गर्न सक्ने अवरोध र तेस्रोमा चुनावमा खटिएका कर्मचारीलाई आइपर्ने सुरक्षा खतरा हुन् । यी सबैको मसिनो गरी अध्ययन गरेर हामीले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाएका छौं ।
विप्लव माओवादी कुन स्तरको चुनौती हो ?
कुनै स्तरको पनि होइन । हामीले सबै नियन्त्रणमा लिइसक्यौं । अहिले यिनीहरु फ्याउरे भइसके । हल्ला फैलाउँछ मात्र, केही गर्न सक्दैनन् । छापामार शैलीमा फुत्त आउँछ र भाग्छ । हामीले जब २३ जना नियन्त्रणमा लियौं, यिनीहरु सकिइसके । बाँकी पनि तीव्र निगरानीमा छन् । शनिबार बन्द भनेर शुक्रबार मसाल जुलुस निकाल्ने भनेका थिए, हामीले त्यसलाई पूरै रोक्यौं । अब केही चुनौती छैन ।
यिनीहरुले केही ठाउँमा सिलिण्डर विस्फोट गराएका छन् । त्यसलाई रोक्न हामीले अर्को अभियान सुरु गरेका छौं । ‘पुन्टे सिलिण्डर’ (साना खालका ग्यास सिलिण्डर) कानूनअनुसार बेच्न पाइदैन । बजारमा भएका पुन्टे सिलिण्डर पूरै बरामद गर्ने अभियान चलाएका छौं । शुक्रबारै ३७ थान सिलिण्डर हामीले बरामद गरिसकेका छौं । फेरि आह्वान गर्छु कि त्यस्ता सिलिण्डर नबेच्नुहोस्, बेचेको वा पसलमा राखेको थाहा पाएमा कारबाही गर्छौं ।
गुण्डागर्दी सुरक्षा चुनौती होइन ?
हो । हामीले गुण्डालाई ५ किसिमले वर्गीकरण गरेका छौं । फ्याउरे गुण्डा, टोले गुण्डा, संरक्षित गुण्डा, व्यवसायिक गुण्डा र अपराधिक गुण्डा । सबभन्दा पहिलो फ्याउरे हो । यिनीहरु कपाल पाल्छन्, मुन्द्रा लाउँछन्, जिउभरि ट्याटु हान्छन् र फ्याउफ्याउ मात्रै गर्छन् अरु केही गर्न सक्दैनन् । दोस्रोमा टोले भनेको टोलको दादा हो । आफ्नो टोलमा डन बन्ने, अरुलाई आउन नदिने मुक्का हानिहाल्ने । तेस्रो संरक्षित भनेको अरुको धाक लगाएर खाने । जस्तो राजनीतिक दलको आडमा वा कुनै शक्तिकेन्द्रको संरक्षणमा गुण्डागर्दी गर्ने, त्यसपछिको व्यवसायिक भनेको ठेक्कापट्टा लिने, टेण्डर हाल्ने अनि त्यसैमा फाइदा लिने र अन्तिममा अपराधिक गुण्डाचाहिं अपराध गर्ने खालका हुन्छन् । तिनीहरुले सुपारी लिएर अपराध गर्छन् । मान्छे मार्नेसम्मको काम गर्छन् । हामीले त्यस्ता सबैलाई निगरानीमा राखेका छौं । चुनावको बेला यिनीहरु अझै सक्रिय हुनसक्छन् । शुक्रबार मात्रै हामीले ११ जना गुण्डा नियन्त्रणमा लिएका छौं । यिनीहरुमध्ये २ जना व्यवसायिक छन् भने अरु सबै फ्याउरे हुन् ।
अहिले मौन अवधि चलिरहेको छ, अवस्था के छ ?
मौन अवधि भनेको पूरै चुनावको गतिविधि रोक्ने अवधि हो । निर्वाचन आचार संहिता २०७२ र स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता २०७३ को परिच्छेद २ को ५ ‘घ’ बमोजिम मौन अवधिमा पालना गर्नुपर्ने आचरण र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम भेला जम्मा हुन, भेला जम्मा भई हिडडुल गर्न तथा रात्रीकालिन समयमा मा.प.से. गरी हो–हल्ला गरी सार्वजनिक सुरक्षामा असर पार्ने गतिविधिहरु हुन नदिन हामीले सूचना जारी गरेका छौं । यदि त्यसो गरेको पाइएमा त्यसो गर्नेलाई हामी नियन्त्रणमा लिन्छौं । यदि प्रशासनको आदेश नटेरे अन्तिम बल प्रयोग गरिन्छ । यो अधिकार फिल्डका प्रहरीलाई छ ।
त्यसो भए भोलिको चुनावका लागि जनता ढुक्क भए हुन्छन् ?
एकदम । चुनावका लागि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । सुरक्षाकर्मी पर्याप्त परिचालित छन् । घरबाट मतदान केन्द्र जाँदा र फेरि घर आउँदा वा भोट हाल्दा डराउनुपर्दैन । ढुक्क भएर भोट हाल्नुस् ।